को को कलाकार पुगे अशिष्माको बिहेमा ? बिहेसँगै फिल्म छाड्ने अशिष्माको संकेत(भिडियो) – An Online Entertainment News Portal
HomeGalleryCelebrityको को कलाकार पुगे अशिष्माको बिहेमा ? बिहेसँगै फिल्म छाड्ने अशिष्माको संकेत(भिडियो)
March 13, 2018 sutraentertainment Celebrity, Entertainment, Event, Female, Kollywood, News 0
नायिका अशिष्मा नकर्मी लगनगाँठोमा कसिएकी छिन् । सोमवार नायिका नकर्मीले बानेश्वरका स्थायी बासिन्दा नविन प्रधानसँग घरबार जोडेकी हुन् । हप्ता दिनकै चिनजानपछि उनीहरु मागी विवाह गर्न राजी भएका हुन् । अमेरिकामा बस्दै आएका प्रधान पेशाले चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट हुन् ।
अशिष्मामाका भाइको साथी रहेका नविन र अशिष्माको कालिमाटीस्थित एक बैंकेटमा नेवारी परम्परा अनुसार भएको हो ।नायिका नकर्मीको बिहेमा नेपाली सिने क्षेत्रका दिग्दज कलाकारहरुको उपस्थिति रहेको थियो । अभिनेत्री लक्ष्मी गिरी, सरिता लामिछाने, कविता शर्मा गेलाल, चैतेदेवी लगायत कलाकारले नायिका नकर्मीको बिहेमा सहभागी भएर आर्शीवाद दिएका थिए ।
बिहे गरेकी नायिका नकर्मीले परिवारको सल्लाह अनुसार नै आगामी दिनमा चलचित्र खेल्ने कि नखेल्ने निर्णय गर्ने उनले बताईन् । उनले आफ्ना जीवनसाथीले चलचित्र नखेल भनेमा चलचित्र समेत नखेल्ने संकेत गरिन । नेवारी फिल्म र म्युजिक भिडियोमा राम्रो पहिचान बनाएकी अशिष्मा सन् २००३ बाट नेपाली फिल्म क्षेत्रमा सक्रिय छिन् ।
‘अन्तराल’ बाट चलचित्र क्षेत्रमा डेब्यु गरेकी नायिका नकर्मीले ‘अर्धकट्टी’ ‘राघव’, ‘तोरी लाउरे’, ‘लभ यु बाबा’, ‘बाटो मुनिको फूल २’, ‘संरक्षण’ लगायत चलचित्रमा अभिनय गरेकी छिन् । अशिष्माले सोमबार साँझ फिल्मीकर्मीलाई बिहे भोजमा निम्तो समेत दिएकी छिन् ।